भिडियो समाचार : प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार, १०१ देशमा फैलियो कोरोनाभाइरस | Ratopati
भिडियो समाचार : प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार, १०१ देशमा फैलियो कोरोनाभाइरस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको पाँचौ दिन ओलीको भाइटल र ल्याब सूचकहरुपनि सामान्य रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्काका
अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नियमित सन्तुलित आहार दिनुका साथै हिँडडुल पनि गराउन थालिएको छ ।
उनलाई मृगौला दिने समीक्षा संग्रौलाको स्वास्थ्य पनि राम्रो रहको छ । संग्रौलाको पनि भाइटल र ल्याब सूचकहरु सामान्य रहेको डा. खड्काले बताए ।
आइतबार अस्पताल पुगेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार भइरहेको बताए ।
आज ११०औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला विदस, देश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी महिला दिवस मनाइएको छ । महिला दिवसको अवसरमा आयोजिक एक कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आर्थिक रुपमा सबल नहुँदा सम्म महिलाहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले संविधानमा उल्लेखित भएका अधिकारहरु सबै भोग्ने अवस्थामा पु¥याउन महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनुपर्ने बताएकी हुन् ।
सरकारले १५ औं योजनामा सन २०३० भित्रमा महिलामाथि हुने सबै खालका असमानताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको र सोही अनुसार नै काम अगाडि बढेको बताइन् ।
उनले राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका महिलाहरुले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गरी महिलाहरु सक्षम छन भन्ने प्रमाणित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानले समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चितता गरेको भएपनि सरकारमा महिला सहभागिता नहुनुले अझैपनि महिलाहरुलाई चुनौति रहेको बताइन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य सांसद कोमल ओलीले महिलाको कुरा महिलाले मात्र उठाएर समाधान नहुने बताइन् ।
सांसद चन्दा चौधरीले विभिन्न पार्टी भित्र रहेका महिलाहरु महिलाको विषयमा पार्टीको ह्विप भन्दा माथि उठेर काम गर्न नसक्दा सम्म महिला अधिकारको सुनिस्चितता नहुने बताइन् ।
अभिनेत्री रेखा थापाले पुरुषहरुको दबदवाकै कारण महिलाहरु कोटामा मात्रै भन्ने महिलाहरुले हिम्मत गरेर चुनावमा पुरुषलाई भोट नहाल्न चुनौति दिइन् ।
कार्यक्रममा महिलाहरुको हक हितका लागि नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरुले आफ्नो जिम्मेवारीमा रही अधिकार र महिलाका मुद्दाका विषयमा एकरुपता कायम गरी सबैले काम गर्नुपर्नेमा महिला नेतृहरुले जोड दिएका थिए ।
बैङ्किङ क्षेत्र हाँक्दै यी महिला सारथी !
राजनीतिक दलमा ‘कोरोना’ प्रभाव !
नेपालमा ३०/४० जनामा मात्रै कोरोनाको संक्रमण देखिए नाकाबन्दी हुने चिन्ता
महिला रोकिए, संसार रोकिन्छ (फोटोफिचर)
बिरामी भान्जीलाई प्रधानमन्त्री मामाको चिन्ता
दिल्ली हिंसामा इरानको टिप्पणीपछि भारत र इरानको सम्बन्धमा किन दरार आयो ?
सिटौलाले तोडेको शशांकको त्यो विश्वास
पार्टी एकताको सहमतिमा मिलेन राप्रपाका नेताहरुको हात !
यता अशिक्षा, राज्यको उदासिनता र पितृसत्तात्मक सोचका कारण राज्यका निकायमा महिलाको समान सहभागिता हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
महिला दिवस मनाइरहँदा अधिकारकर्मीहरुले संविधानले महिला समानता र अधिकारका कुराहरु स्पष्टसँग उल्लेख गरेको भएपनि राज्यको उदासिनताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् ।
महिला पुर्नस्थापना केन्द्रका संजिता तिम्सिनाले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएका कारण विभेद कम हुन नसकेको बताइन् ।
सामाजिक मूल्य मान्यतहरुले महिला पुरुष समान नागरिक हो भन्ने नदेखेको उनले बताइन् ।
नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य मिना कोइरालाले पितृसत्तात्मक सोचले महिलाहरुलाई घरबाट बाहिर आउने वातावरण अझै बन्न नसकेको बताइन् ।
नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य रमा महत बस्नेतले सरकारको कमजोरीका कारण महिलाहरुले समान ज्याला समेत पाउन नसकेको बताइन् ।
महिला अधिकार मञ्च ललितपुरका अध्यक्ष विष्णु खनालले शिक्षाको कमिका कारण अहिलाहरु हिंसामा पर्ने गरेको बताइन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ । आइतबार १ सय १० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ ।
राजनीतिक दलमा ‘कोरोना’ प्रभाव
३१ डिसेम्बर २०१९ मा चीनको उहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसबाट हालसम्म विश्वका १०१ देश प्रभावित भइसकेका छन् । कोरोनाबाट १ लाख ५ हजार बढी मानिस संक्रमित भएका छन् भने ३ हजार ६ सयको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसैगरी यो रोग इटली, इरान, स्पेन लगायतमा देशमा तिव्र गतिमा फैलिरहेको छ । चाइनामा भने संक्रमितहरुको संख्या घट्न थालेको छ ।
नेपालसमेत यो रोगको उच्च जोखिममा रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जानकारी गराइसकेको छ । यद्यपि नेपालमा अहिलेसम्म एक नेपालीबाहेक अरूमा यो रोगको सङ्क्रमण भेटिएको छैन । सङ्क्रमण भएका व्यक्ति पनि अहिले उपचार गरेर फर्किसकेका छन् ।
कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिन नेपाल सरकारले विभिन्न नाकामा हेल्पडेक्स स्थापनादेखि अत्यावाश्यक कामबाहेक अन्य देशमा नजान, शैक्षिक संस्थाहरूमा सतर्कता अपनाउन निर्देशन जारी गरिसकेको छ । त्यस्तै सभा, सम्मेलन र भोजभतेर समेत नर्गन सरकारले अनुरोध गरेको छ । शैक्षिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत यसको प्रभाव विस्तारै बढ्न थालेको छ । जसले मुलुकको समग्र अवस्थालाई थला पार्ने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् ।
योसँगै, प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा, नेपाली काँग्रेस, राप्रपा लगायतका दलले आगामी वर्ष महाधिवेशनको तयारीमा छन् । त्यसका लागि सङ्गठन विस्तारदेखि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका ती दलले आफ्ना कार्यक्रम रोक्न बाध्य भएका छन् । विशेषगरी फागुन र चैत केन्द्रित पूर्वनिर्धारित उनीहरुका ठूला कार्यक्रम ठप्पजस्तै बनेका छन् ।
कोरोना भाइरसको सन्त्रास बढेसँगै नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कतिपय पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम परिमार्जित र स्थगित गर्न पुगेका हुन् । राजनीतिक दलहरुले कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्न नदिन ठूला सभा, सम्मेलन र भेला आफूले पनि नगर्ने र अरूलाई पनि नगर्न आह्वान गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै उनीहरुले कोरोनाबाट बच्न जनचेतनामूलक सामग्री प्रकाशित गर्नुका साथै सबै मिलेर यस रोगलाई परास्त गर्न अपील पनि गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, सङ्घीय समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी लगायतले आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगन गर्दै सचेतना फैलाउनेतर्फ परिमार्जन गरेका छन् ।
फेब्रुरुअरी २६ तारिखमा नेपालबाट बिदा मनाएर अष्ट्रेलिया फर्किएका २० वर्षे एक विद्यार्थीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
अष्ट्रेलियाको स्थानीय समाचार एजेन्सी सेभेन न्यूज डट कम डट एयूका अनुसार ती विद्यार्थी फेब्रुअरी २६ तारिखमा नेपालबाट सिंगापुर र सिड्नी हुँदै होबार्ट पुगेका थिए । अधिकारीका अनुसार उनलाई फेब्रुअरी २७ तारिखमा रुघा खोकी लाग्दा देखिने लक्षण देखिएको तर उनले मार्च ६ मा मात्रै हेल्थ हटलाइनमा सम्पर्क गरेका थिए ।
उनको शुक्रबार रोयल होबार्ट अस्पतालमा परीक्षण गरिएको र उनलाई अलग राख्न (सेल्फ आइसोलेसन) आग्रह गरिएको भए पनि त्यसलाई उनले पालना नगरेको बताइन्छ । उनलाई कोरोनाको संक्रमण भएको शनिबार पुष्टि भएको र लगत्तै आइसोलेसनमा राखिएको जानकारी दिइएको छ ।
अष्ट्रेलियन आइडल कलेजका विद्यार्थी उनी नेपालबाट फर्किएपछि दुई पटक कलेज गएको बताइन्छ । उनले पछिल्ला केही हप्तामा ग्रान्ड चान्सलर होटलमा पनि विभिन्न सिफ्टमा काम गरेका थिए । स्वास्थ्य अधिकारीले उनीसँगको नजिकको सम्पर्कमा आएका सह–कर्मीको पहिचान गर्ने प्रयासमा रहेको बताएका छन् । यसका साथै उनीसँगै बस्ने चारजना र अन्य तीनजनालाई १४ दिनको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
स्वास्थ्य अधिकारीहरुले उनी चढेर आएको जहाजको विस्तृत विवरण पनि लिने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।
यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोना भाइरस (कोभड १९) नियन्त्रणका लागि त्रिभुवन विमानस्थल र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई विभिन्न सामाग्रीहरु उपलब्ध गराएको छ ।
चेम्बरले आइतबार एक कार्यक्रम गरी त्रिभुवन विमानस्थल हवाई उड्डयन कार्यालय र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई मास्क, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, एप्रोन, ह्याण्ड ग्लोभ लगायतका सामाग्रीरुरु उपलब्ध गराएको हो । कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को सम्भावित प्रकोप नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आफुहरुले उपलब्ध गराएको सामाग्रीदृ सघाउ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सोलार आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा
२५ मेगावाटमध्ये १५ मेगावाट विद्युत आगामी वैशाखभित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । १० मेगावाट चैत र बाँकी ५ मेगावाट वैशाखभित्रमा उत्पादन गरिने छ । बाँकी १० मेगावाटका लागि प्यानल राख्ने ठाउँको पहिचाहन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको देवीघाट विद्युत केन्द्रको नाममा रहेको जग्गामा राखिएको सोलार प्यानलमार्फत दिउँसो उत्पादित विद्युत सोझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशकहरु हरराज न्यौपाने र बज्रभूषण चौधरी लगायतको टोलीले शनिबार आयोजना निर्माणस्थलको निरीक्षण गरी निर्माणमा देखिएका समस्या,विद्युत् उत्पादन मितिलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।
प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि पिक समयको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।